Ukuphupha kweNombolo 9 Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga neNombolo 9
Inani elisithoba libalulekile kusimboli yamanani ikakhulu kuba sisiphumo sokwandisa inani lobuthixo ngokwalo. Kule meko, ezisithoba zimele ubuthixo ngokupheleleyo, zinikwe amandla. Kwimathematika, ingcambu ye-9 linani le-3, ke eli nani kufuneka lithathelwe ingqalelo xa kutolikwa amaphupha. Ngokusisiseko inombolo ye-9, ukuba engaqhelekanga, ikwangokomgaqo wobudoda.
Kwinkolelo edumileyo, kuthiwa ikati inobomi obulithoba, kwaye iqhalo lisetyenziswa kubomi bemihla ngemihla. "Owu sithoba siluhlaza!" kwaye ngethamsanqa elincinci kunye nesakhono uya kubanjiswa i-bowling "Konke okutsha".
Kodwa ukuqwalaselwa okunjalo akubalulekanga kuphela xa kutolikwa inani lesithoba kwinqanaba lokwenyani. Ingabonakala njengophawu kumaphupha ethu. Nalapha ngamanye amaxesha kubhekiswa kuThixo, ngamanye amaxesha iindawo zobudoda ebomini bomntu kuthethwa ngaye.
Kodwa yintoni enye enokuthi inombolo ye-9 njengomqondiso wephupha?
1 Uphawu lwephupha «inombolo 9» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «inombolo 9» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inombolo ye-9» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «inombolo 9» - ukutolikwa ngokubanzi
Kuba inani elisithoba luphawu lobuthixo ngokupheleleyo, linokubhekisa kwiinkalo zonqulo kubomi bomntu obandakanyekayo emaphupheni. Ukuphupha kusenokwenzeka ukuba kujongana nemibuzo malunga nezi ntsuku. Ukukholelwa y Inkolo. Ngokoluvo oluqhelekileyo, ukufuna ukugqibelela nako kunokuba semva kokuvela kwenani le-9 ephupheni.
Ngokusisiseko, isimboli "inombolo 9" kunye nokudityaniswa kwayo okunje nge-90 okanye i-99 nayo ikwabizwa ngokukodwa. Uvelwano gqiba. Lowo uphuphayo unokuvelana ngokulula nommelwane wakhe, u-intuitive uziva uvelwano yiyo loo nto ethathwa njengomhlobo kunye nomphulaphuli olungileyo. Umntu ochaphazelekayo ngamanye amaxesha uswela isisombululo esisebenzayo nesiluncedo kubomi bemihla ngemihla.
Ke ngoko, inani elithoba linokucela ephupheni kwangaxeshanye ukuba lisebenze kolu lungelelwaniso lwenziwayo lungaphuhliswanga kunye nokuphucula izakhono kwindawo leyo.
Ngenxa yokuba igama "elitsha" likwabandakanyiwe kwigama "ezisithoba," abanye abaphandi baphupha bacinga ukuba inani le-9 ephupheni likhomba kwinto entsha, a utshintsho ibonisa. Kule meko, umntu onomdla ugqiba icandelo lobomi bakhe aze azinikezele kwimisebenzi emitsha.
Rhoqo oku kunxulunyaniswa ikakhulu kwinqanaba labucala lobomi: umntu ophuphayo ucinga ngekamva losapho lwakhe, uyazibuza ukuba lixesha lokuba inzala Ndingayenza. Nangona kunjalo, kubo bonke ubomi bakho, kufuneka ulumke ungagqithisi.
Uphawu lwephupha «inombolo 9» - ukutolikwa kwengqondo
Kwingcaciso yengqondo yephupha, inani le-9 limanya zonke izinto zokomoya kunye amandla engqondo lomntu ochaphazelekayo. Isimboli igxininisa ngokukodwa kumalungu omeleleyo nawendoda yomlinganiswa.
Ukongeza, ngokwe-psychoanalysts, inani le-XNUMX likwaluphawu lweempawu ezinje ngokukhangela inyaniso, imisebenzi yengqondo kunye nemvisiswano. Ngokusekwe kwezi mpawu zomlinganiswa, ukuphupha kungakhawuleza kwenziwe inkqubela phambili kuphuhliso lwakho.
Uphawu lwephupha «inombolo ye-9» - ukutolika kokomoya
Ngokwendlela yokutolika, inani lesithoba limele ephupheni ukuqala nokuphela kwesinye. umjikelo wokomoya. Umntu ochaphazelekayo uyakuqonda oku. Amaxesha ngamaxesha, nangona kunjalo, inani 9 liqondwa njengophawu lomlingo kwaye amagunya ahlaselayo.
Iphupha malunga nePrado